Okwu banyere colonialism - Aimé Césaire - Afrikhepri Fondation
Peeji Facebook anyị
Zụta akwụkwọ ma ọ bụ ngwaahịa
Wenezdee, Ọktọba 21, 2020
Okwu banyere colonialism - Aimé Césaire
Na-agụ: 10 min
0 / 5 Cheta na: 5
Ibe akwukwo gi:
UỌdịdị mmepeanya nke na-enweghị ike idozi nsogbu ndị na-esite na arụ ọrụ ya bụ mmepeanya na-emebi emebi. Ihe mmepeanya nke na-ahọrọ iji anya ya leghara nsogbu ya kachasị mkpa bụ mmepeanya metụtara. Azụmahịa aghụghọ na ụkpụrụ ya bụ ọdịnala nke moribund.
Ihe mere bu na a na-akpọ mmepe nke European, mmepeanya nke ọdịda anyanwụ, dịka narị afọ abụọ nke ọchịchị bourgeois, enweghị ike idozi nsogbu abụọ bụ isi nke ịdị adị ya kpatara ọ kpatara: nsogbu nke akwụkwọ nyocha na nsogbu ndị ọchịchị; nke ahụ, zoro aka na mgbochi nke nsụhọ, Europe a enweghị ike ịkọwa onwe ya; na na, ọ na-agbaba, na-agbaba na ihu abụọ ka ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi na enwere ohere na -aghọgbu ya.
Europe bụ nke a machaghị ịgbagha.
O yiri ka nke a bụ nchọpụta nke ndị na-eme atụmatụ na ndị America na-ekwupụta na olu dị ala. Onwe ya ọ dịghị mkpa. Ihe dị oké njọ bụ na "Europe" bụ omume, na-enweghị ike ime mmụọ.
Taa, ọ na-apụta na ọ bụghị nanị ndị Juu na-emejọ, kama na a na-eme mkpesa ahụ na ọkwa ụwa site na iri puku kwuru iri puku ndị ikom, site na ala ala ịgba ohu, ghọọ ndị ikpe.
You nwere ike igbu mmadụ na Indochina, ịta ahụhụ na Madagascar, tụọ mkpọrọ na Black Africa, na-akpasu iwe na West Indies. Ndị agbaji mara ugbu a mara na ha nwere uru karịa ndị na-achị ala ọzọ. Ha maara na “ndị nwe” ha nwa oge na-agha ụgha.
Nke mere na nna ukwu ha adịghị ike.
Ma ebe ọ bụ taa, a rịọrọ m ka m kwuo okwu banyere ịchịchị na mmepeanya, ka anyị gaa na ụgha ụgha nke ndị ọzọ niile na-amụba.
Mmechi na mmepeanya?
Amaokwu kachasị njọ na okwu a bụ ịghọ dike na ezi okwukwe nke ihu abụọ, nke nwere ike imebi nsogbu ndị ahụ ka ha nwee ike ịkọwa ihe ọjọọ ọjọọ ha na-eweta.
Nke a pụtara na isi ebe a bụ ịhụ n'ụzọ doro anya, na-eche n'ụzọ doro anya, na-anụ egwu azịza doro anya na-emeghị ihe ọjọọ na mbụ ajụjụ: ihe ụkpụrụ na amalite ịchị? Iji kweta na ọ bụghị; abughi evangelization ma philanthropic enterprise, ma ọ bụ uche ndabere n'ókèala amaghị, ọrịa, ọchịchị aka ike, ma ọ bụ ịmụba ọnụ ọgụgụ nke Chineke ma ọ bụ ndọtị nke iwu, na-ekweta ozugbo na ihe niile na-enweghị flinching uche ndị na-esi na ike mee ihe, ebe a bụ onye njem na paireti, na grocer na ukwu na ndị nwe ya, onye gold digger na ahia, agụụ na ike, na-akpata dobe onyinyo, ọjọọ, a ụdị nke mepere anya na e nwere mgbe ya akụkọ ihe mere eme, chọtara onwe ya ụgwọ, internally, ịgbasa asọmpi zuru ụwa ọnụ nke ya emegide aku.
N'ịga n'ihu nyocha m, achọpụtara m na ihu abụọ bụ nke na-adịbeghị anya; na ma Cortez chọpụtara Mexico City si n'elu akwa teocalli ma Pizarro ka Cuzco (ka naanị n'ihu Cambaluc Marco Polo), ga-mkpesa na-harbingers nke a elu n'usoro; na ha gburu; na ha nāpunara madu ihe; na ha nwere okpu agha, ube, cupidities; na ndị na-abaghị uru bịara mgbe e mesịrị; na onye ndu ukwu di n'ubi a bu ihe ndi nke ndi Kristain, n'ihi na ha etinyewo uzo ndi n'emegh:
Iso Ụzọ Kraịst; nmekorita nke ndi na-ekpere arusi, site na nke a nwere ike imata ihe ndi ozo choro na ndi mmadu bu ndi mmadu bu ndi Indians, Yellow, Negroes.
Na nke a, ekwetara m na itinye ọdịdị dị iche iche na ibe gị dị mma; na ịlụ di na nwunye dị iche iche dị mma; na mmepeanya, ihe ọ bụla nke nwere ike ịbụ onye maara ihe nke ọma, ịdakwasị onwe ya, na-ebelata; Ebe a bụ na mgbanwe nke oxygen, na ohere nke Europe bụ iji ndidi a crossroads, na na ndidi locus nke niile echiche, na-awụnye nke niile na nkà ihe ọmụma, na Ebe obibi nke mmetụta niile mere ka ọ bụrụ onye kachasị ike nke ike.
Ma mgbe ahụ, ana m ajụọ ajụjụ ahụ: Ọchịchị na-enweta n'ezie? Ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na onye kachasị amasị gị, ọ bụ ya kacha mma?
Ana m aza ee e.
M na-ekwu na site n'ọchịchị gaa na mmepeanya, ebe dị anya enweghị njedebe; na nke ihe nile a chịkọtara colonial, nke usoro iwu ndị ọchịchị dum, nke ndị niile na-eje ozi na-ezigara, otu uru mmadụ agaghị enwe ike ịga nke ọma.
Ihe mbu anyi kwesiri imuta bu banyere ichighari anyi mmadu n’ibepu ndi mmadu banyere ochichi anyi, imebi ya n’echiche nke okwu, mechu ya ihu, teta ya ili ebum n’uche, ime ihe ojoo, ime ihe ike, ikpa agbụrụ, omume metụtara omume, ma gosipụta na, mgbe ọ bụla enwere na Vietnam-Nam isi gbawara agbawa na anya gbara ọchịchịrị na na France anyị nakwere, nwatakịrị nwanyị dinara n'ike na nke anyị na France na-anabata, Malagasy a tara ahụhụ na nke ahụ na France anyị nakwere, enwere mmepeanya nke na-atụlata ibu ya nwụrụ anwụ, mmejọ zuru ụwa ọnụ nke na-ewere ọnọdụ, ajọ egbe na-esetị, ọrịa na-efe efe nke na-agbasa ma na njedebe nke nkwekọrịta ndị a niile mebiri emebi, ụgha ndị a niile na-agha ụgha, a na-anabata ndị mkpọrọ a niile, ndị mkpọrọ a niile na-agbagha ma “gbaa ha ajụjụ ọnụ”, ndị isi obodo a niile tara ahụhụ, na ngwụsị nke agbamume agbụrụ a, mpako a na-agbasa, enwere nsí ahụ etinyere na akwara nke Europe, na pro ejiri nwayọ nwayọ ma jide n’aka n’ala ịkpa kọntinenti ahụ.
Na mgbe ahu, otu ubochi oma, ihe gha emegheghachitere buogeoisie ahu: ndi gestapos na aru oru, ulo nkporo juputara, ndi ahu nmekpa ahu nchoputa, megharia, kparita uka gburugburu.
O juru anyị anya, anyị na-ewe iwe. Ha sịrị: “Lee ka o si chọọ ịmata ihe! Mana, ọ dị mma! Ọ bụ Nazism, ọ ga-agafe! Anyi echere, we nwe olile anya; mmadu ghapu idepu onwe ya eziokwu, na obu ihe ojoo, kama obu nmebi ihe nile di uku, nke ahu bu nke na-achikota ndu ubochi nile; na ọ bụ Nazism, ee, mana na tupu anyị enwee mmerụ ahụ, anyị bụ ndị rụzuru ya; Na Nazis a, anyị kwadoro ya tupu ịnwe ya, anyị wepụrụ ya, anyị mechiri anya anyị, anyị mebere ya, n'ihi na, ruo mgbe ahụ, ọ bụghị etinyere naanị ndị na-abụghị ndị Europe; na Nazis a, anyị zụlitere ya, anyị nwere ihe kpatara ya, ọ makwara ntị, ọ na-amapu, na ọ na-ada, tupu ọ kụnye ya na mmiri ya na-acha ọbara ọbara, nke ihe juputara na mmepe anya Western na Christian.
Ee, ọ ga-abara gị uru ịmụ, nyocha nke ọma, nke ọma, usoro nke Hitler na Hitlerism ma kpughee ndị ama ama, mmadụ dị oke egwu, Christian nwere bourgeois nke narị afọ nke iri na itoolu na ọ nwere Hitler na ya. onye n’amaghi, na Hitler bi n’ime ya, na Hitler bu mo-ojo ya, na oburu na o kpuchie ya, obu nihi enweghi ezi uche, na na ala, ihe ya n’agbagharaghi Hitler, ọ bụghị mpụ n'onwe ya, mpụ megide nwoke ahụ, ọ bụghị mmechuihu nke nwoke ahụ n'ime onwe ya, ọ bụ mpụ megide onye ọcha, ọ bụ mmechuihu nke nwoke ọcha, na itinye ya n'ọrụ na ụzọ ndị Europe si eme ka ọchịchị onye kwuo uche ya, nke bụ naanị ndị Arab nke Algeria, oyi nke India, na nkwụghachi nke Africa.
Nke a bụ nkọcha dị oke ọnụ nke m na-ekwu okwu banyere nchịkọta mmadụ: ọ bụrụ na ọ dị ogologo oge na-ebelata ikike ụmụ mmadụ, ka ha nwee ya, ka ha ka nwere ike imebi ya, na-ele mmadụ anya n'ihu na, ihe nile elere anya, ndi mmadu bu ndi mmadu.
Agwara m ọtụtụ ihe banyere Hitler.
O kwesịrị ya: ọ na-enye ohere ịhụ nnukwu ma ghọta na ndị isi obodo ahụ, n'oge ọ dị ugbu a, enweghị ike ịtọ ntọala nke ndị mmadụ, ebe o yiri ka ọ nweghị ike ịchọta ụkpụrụ omume onye ọ bụla. Dị ka ya ma ọ bụ: na njedebe nke cul-de-sac
Europe, M pụtara Europe nke Adenauer, Schuman, Bidault na ndị ọzọ ole na ole, Hitler dị. Na njedebe nke ikeketeorie, na-achọ ịdị ndụ, Hitler dị. Na njedebe nke ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu, ha di Hitler.
Ya mere, otu n'ime ahịrịokwu ya na-enye onwe m:
"Anyị na-achọsi ike, ọ bụghị maka nha anya, kama maka ịchịisi. Mba nke agbụrụ mba ọzọ ga-aghọkwa mba nke ndị ọrụ serfs, ndị ọrụ ụbọchị ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ bụghị ajụjụ nke iwepughị erughị eru n'etiti ụmụ nwoke, kama ịkwalite ha ma mee ka ha bụrụ iwu. "
Ọ na-ada ụda, dị mpako, obi ọjọọ, ma na-etinye anyị n'etiti mkpuchi ahụ. Ma ka anyị gbadata otu ogo.
Ònye na-ekwu okwu? Ihere na-eme m ikwu ya: ọ bụ Westernist humanist, onye "ọkà mmụta". Na aha ya bu Renan bu ihe kwesiri ihu. Ma ọ sitere n'akwụkwọ kpọrọ aha: Ndozigharị nke Omume na Omume, na e dere ya na France, mgbe agha nke France chọrọ ka ọ ghara imegide ike ahụ, ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ndị mgbochi bourgeois .
"Mweghachi nke agbụrụ ndị dị ala ma ọ bụ agbụrụ nke ndị agbụrụ dị elu dị n'usoro iwu nke ụmụ mmadụ. Nwoke nke ndi mmadu a di ka mgbe niile, na ulo, onye mara mma, nke aka ya ka mma iji mee mma agha karia ihe eji eme ihe. Kama ịrụ ọrụ, ọ na-ahọrọ ịlụ ọgụ, ya bụ, ọ laghachiri na nke mbụ ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekpe ekpere, ọ bụ ọrụ anyị. Rụ ọrụ a na-eri na mba ndị, dị ka China, na-akpọ mmeri mba ọzọ. Ndị adventurers ndị na-echegbu onwe ha na ndị Europe, na-eme ka anụ ọhịa worm, dị ka nke ndị Franks, Lombards, Normans, onye ọ bụla ga-arụ ọrụ ya. Omume emeela agbụrụ nke ndị ọrụ, ọ bụ agbụrụ ndị China, na-enwe obi ụtọ nke aka dị ebube, na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha enweghị nkwanye ùgwù; chịkwaa ya n'ikpe ziri ezi, site n'ịnara ya, maka uru nke gọọmenti dị otú ahụ, nnukwu ụda ọkụ maka ọdịmma nke agbụrụ ahụ na-emeri, ọ ga-eju afọ; agbụrụ nke ndị ọrụ ụwa bụ Negro; bụrụ ya onye ọma ma dị umeala n'obi, ihe nile ga-adịkwa n'usoro; agbụrụ nke nna ukwu na ndị agha bụ agbụrụ Europe. Belata agbụrụ a magburu onwe ya na-arụ ọrụ na ergastule dị ka Negroes na Chinese, ọ na-enupụ isi. Onye nnupụisi ọ bụla, ma ọ bụ ma ọ bụ obere, onye agha na-ahapụ ọrụ ya, a na-eme ya maka ndụ gwụ, ị na-etinyekwa n'ọrụ n'ọrụ megidere agbụrụ ya, onye ọrụ ọjọọ, ezigbo onye agha. Ugbu a, ndụ nke na-emegiderịta ndị ọrụ anyị ga - eme ka onye China, onye agha, onye obi ụtọ, onye na - adịghị agha. Kwe ka onye ọ bụla mee ihe ha na-eme maka, na ihe niile iraban. "
Hitler? Rosenberg? Mba, Renan.
Ma, ka anyị gbadaa ọzọ. Ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị verbose.
Ònye na-eme mkpesa? Ọ dịghị onye na m maara mgbe Mr. Albert Sarraut, ekenyenede okwu na ụmụ akwụkwọ nke chịrị mba School, na-akụziri ha na ọ ga-ụmụaka na-emegide European ụlọ ọrụ nke amalite ịchị "ihe ahụ e boro nri nke na-arụ na onye maara ihe ọzọ ikike nke ikpo oke uzo nke gaga n'iru na aka efu bu ihe onwunwe efu efu n'enweghi oru.
Na iwe ịnụ a PR Bard hụ na ngwongwo nke ụwa a, "ma ọ bụrụ na ha nọgidere ekewa ruo mgbe ebighị ebi, dị ka ha ga-enweghị amalite ịchị, ọ dịghịkwa zaghachi nzube Chineke, ọ bụghị dị nnọọ chọrọ nke obodo mmadu "?
Ebe, dị ka e kwuru site ya otu na Christianity, Nna Müller, "na ndi mmadu na-agaghị, nwere ike na-ata ahụhụ Nkwarụ, ileghara, umengwụ nke ime ọhịa ebighị ebi ezumike na-enweghị ọrụ akụ Chineke nyefee ha ozi iji mee ka ha na-ejere ndị mmadụ ozi ọma ".
Ekwuru m na ọ bụghị onye dere akwụkwọ ikikere, ọ bụghị onye ọkachamara, ọ bụghị onye nkwusa, ọ bụghị onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị onye nchịkwa iwu na okpukpe, ọ bụghị "onye na-agbachitere mmadụ".
Ma, site n’ọnụ Sarrauts na Ogwe, ndị Muller na ndị Renans, site n’ọnụ ndị kpere ikpe ma chee na o ziri ezi itinye aka n’etiti ndị na-abụghị ndị Europe, na maka abamuru nke mba ndị ka sie ike ma dị mma, " ụdị ịpụ apụ maka ịba uru ọha ", ọ bụrịrị Hitler!
Ebee ka m chọrọ ịga? N'echiche a: na ọ dịghị onye na-ekpuchi n'ụzọ na-enweghị ntụpọ, na ọ dịghị onye ọ bụla nwere mkpuchi na-enweghị ntaramahụhụ; na otu mba nke na - ejisi ike, na mmepeanya nke na - egosi na ịhapụ coloniation abụrụla ọrịa na - arịa ọrịa, mmepeanya metụtara omume, nke, n'ụzọ enweghị nsogbu, site na mwepu gaa na agọnarị, kpọrọ ya Hitler, m pụtara ntaramahụhụ ya.
4 ọhụrụ site na 5,20
5 jiri site na 5,20 €
Zụta € 5,20
Emelitere ikpeazụ na October 21, 2020 6:47 am
Tupu iju mmiri ahụ - Akwụkwọ edemede (2019)
Nwoke mbu - Akwukwo (2017)
Lelee Butler (2013)
Amụma Africa dị n'Eshia site n'oge ochie ruo ugbu a
POST ISIOKWU NA SITE
Site na ịpị akara ngosi, ị nwere ike idezi ederede gị ma bipụta ya. Jikọọ:
Ndị edemede, ndị nyocha, ndị sayensị, n’ime, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ndị prọfesọ na ndị na-ede blọgụ, na-abụ ndị ntinye aka.
Categories Họrọ udi otu Ka ihichapụ AFRIKHEPRI-TV Nwee obi ụtọ EBOOKS LIBRARY mmezi AKWỤKWỌ AFRICAN Egwuregwu ndị enyi ojii NTỤRỤNDỤ akwụkwọ ỤMỤAKA gburugburu ebe obibi Ịgba ohu Ihe ndi ozo ỤLỌ NNA Ụmụ nwanyị AFRICA MGBE NA-ECHI OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ N'ỤLỌ AFRICAN Ndebanye / nbanye NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ KINDLE NZUKWU KAMA ere akwụkwọ TV LIVE AKWỤKWỌ Ị GA-EFE AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Akwụkwọ PDF AKWEKWỌ AKWIRKWỌ EGWÚ OZI, OZI PARADIGM KAMIT KAMA MGBE AKWỤKWỌ AFRICAN NA SAGES PHILOSOPHY & ỤBỌCHỊ Ihe omimi na psychology Health and Medicine EGO poems PSYCHART ọgwụ EZE AFRICA AHUIKE NA MEDICINE AJỤMỤ NA ỤBỤRỤ AKWỤKWỌ UZI NA NDỊ EZIOKWU egwuregwu AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ / OZI VIDIO Web-TV